IDowns ihlwithe obefunwa yiChiefs | News24
Durban - IMamelodi Sundowns ishaye ikhanda iKaizer Chiefs isayinisa umdlali ovunjululwe nguSteve "Mphathi" Komphela ongumqeqeshi weziMpofana.
Leli phephandaba selingakuqinisekisa ukuthi uDeolin Mekoa odlala ophondweni lwesokunxele phambili kwiMaritzburg United ngesizini ezayo uzokube egijima kwiSundowms emuva kokuba la makilabhu evumele ngeledlule ukudayiselana.
Lo mdlali ubefunwa uthuli yiChiefs kwazise uvunjululwe nguKomphela esengumqeqeshi weMaritzburg.
Nokho iChiefs ishayekile njengoba kuvela ukuthi iSundowns iqhamuke netshe lemali kumnikazi weTeam of Choice, uFarook "Ntshebe" Kadodia, wavele waconsa amathe wavuma ukumudedela.
OLUNYE UDABA: UGabuza uholele izinkunzi zaseSoweto kowandulela owamanqamu
"IMaritzburg neSundowns bebenomhlangano ngeledlule uKadodia wavuma ukumudedela uMekoa. Sebevumelane ngakho konke. Njengoba ngikhuluma nawe nje imenenja yalo mdlalo uGlyn Binkin imatasa ibamba imihlangano neSundowns ukuqedela indaba yemali yomholo walo mfana nemali yokusayina. Kodwa yena sengingakuqinisekisa ukuthi ngesizini ezayo uzokube egijima kwiSundowns, iChiefs ebimufuna isiyishayile iSundowns," kusho lo mthombo.
Imizayo yokuthola uBinkin ukuba aphawule ngalolu daba iphunzile njengoba ucingo lwakhe beluvaliwe.
UKadodia ebuzwa ngalolu daba, uthe okwamanje ngeke akwazi ukuphawula ngalo. "Ngicela silinde kuze kuphele isizini yilapho kuzocaca khona ukuthi kwenzakalani," kusho uKadodia.